Myanmar Defence Weapons: မြန်မာ့တပ်မတော် အပေါ့စားတိုက်ပွဲဝင်တင့်နှင့် သံချပ်ကာတိုက်ယာဉ်များ
sai hein May 15, 2014 at 7:11 PM
Falcon May 15, 2014 at 8:08 PM
T-90 များ ဘယ်တော့ ရောက်မလဲဟင်.... မြင်ချင်လှပြီဗျာ့.... ။ နော်ရင်ကို ရဲ့ MBT- 3000 တွေနဲ့ T-90 တွေနဲ့ ဘယ်သူ အားသာမလဲဗျ..။နှစ်မျိုးလုံး သာ ၀ယ်ပါဗျာ..... ကောင်းပါတယ်...။ ပို့စ်တွေတင်တာ... နည်းသဗျာ..။ များများ ရေးကြပါဆရာတို့ ရာ..။
MM May 17, 2014 at 10:46 PM
T-90 ရဲ့ မျိုးဆက်အလိုက်လည်း ကွဲသေးတော့ နည်းနည်းပြောရခက်တယ်ဗျ... မျက်လုံးနီမပါရင်တော့ MBT-3000 လည်းအဆင့်မြှင့်တဲ့တင့်မို့ သဘောကျမိပါတယ် :)
Falcon May 20, 2014 at 10:17 PM
ကို MM ... မျက်လုံးနီကြီးတွေရဲ့ အဓိက function က .. Electronic စစ်ဆင်ရေးအတွက်လားဗျ...။ တင့်ဖျက် ပဲ့ထိန်းဒုံး တွေကို လမ်းလွှဲ တာမျိုးလား.... ။ ရှင်းပြပေးပါဦး ဗျ..။ စာဖတ်ပရိတ်သတ်နဲ့ keep in touch လုပ်ပေးလို့ ကျေး ဇူး တင်ပါတယ်....။
aye htunn May 15, 2014 at 11:10 PM
ကို mmရေ တိုက်လေယာဉ် သတင်းကြားရင် အချိန်မဆိုင်းဘဲ ပြောပြနော်။
MM May 17, 2014 at 10:45 PM
ကြားတော့ ကြားတယ်ဗျ.. မသေချာသေးလို့ သတင်းအမှားဖြစ်နေမှစိုးလို့ပါ :D
sai hein May 16, 2014 at 12:54 AM
တပ်မတော်လေအကြောင်းကို တပတ်တပုဒ်လောက် တင်ပေးပါ ကိုအမ်အမ်ရေ...ကျတော်က အကို့ဆိုဒ်ကို နေ့တိုင်းလာကြည့်တယ်..တနေ့ကို နှစ်ခေါက်အနည်းဆုံးပါ...ပိုစ့်အသစ်တင်ထားတာ မတွေ့ရင် အဟောင်းတွေကို ပြန်လှန်လှန်ပြီးဖတ်တာတောင် တော်တော်ထပ်နေပြီဗျ...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
MM May 17, 2014 at 10:44 PM
ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကိုရေ.. ကြိုးစားနေပါတယ် :)
Kyawzaww tun May 16, 2014 at 1:20 AM
ဟုတ် သိရင်ချက်ချင်းတင်ပေးပါ့မယ် :D
ko phone May 16, 2014 at 3:39 AM
What about Type 63 light tank?
MM May 17, 2014 at 10:43 PM
Type-63 က အဓိက amphibious တင့်အနေနှင့်သုံးတာမို့ ဒီထဲမထည့်ထားတာပါ :D
aunglin htut May 18, 2014 at 12:25 AM
ကိုMM ရေ HQ-12 လေကော ဘာထူးသေးလဲဗျ ကာချုပ်သွားတာ လေယဉ်ကိစ္စမဖြစ်ပါစေနဲ့ ဒါမှ ကျနော်တို့ ဖြစ်စေချင်တဲ့ SMT တို့4++ တို့ ဖြစ်မှာ 35 ကြီးမြင်ချင်လှပါပြီဗျာ
Anonymous May 19, 2014 at 5:39 AM
ကျွန်​​တော်​လည်း SMT တို့. MIG 35 တို့ပဲမြင်​ချင်​ပါတယ်​ဗျာ
Theik Di Zaw May 19, 2014 at 5:43 AM
Aunglan Takon May 27, 2014 at 6:20 AM
Thi Ha May 30, 2014 at 8:58 AM
မြန်မာ.တပ် မတော် ကြည်း ရေ လေ အင် အား လေး သိ ချင် ပါတယ် ဒီ မှာ ဖေ.ဘုတ်မှာ ကုလား တစ် ကောင် က သူတို. ဘင်္ဂလား ဘက် က ပဲ ပို အင် အား ကောင်း သလို ဗီဒီယို နဲ. ပြ နေ တယ် ဗျ.. လက် ယား နေ တာ ပဲ .ေ စာက် ကုလား တွေ ကို ဆော် စမ်း ပါ ဗျာ
Aunglan Takon May 31, 2014 at 2:21 AM
koko aung June 1, 2014 at 5:08 AM
ကုလား လူပါးအရမ်းဝတယ် ဗျာ
Sai Thureinlynn June 22, 2015 at 2:58 AM
Fb မှာပြန်​share လို့ရလားဗျ